‘गोरुजुधाई मेलामा ५० हजार दर्शक उतार्ने लक्ष्य छ’
प्रकाशित मिति: 2016/01/04
जनकराज ढुंगाना –अध्यक्ष तथा संयोजक, मेला व्यवस्थापन तथा समायोजन समिति, तारुका
प्रत्येक माघेसङ्क्रान्तिमा नुवाकोटको तारुकामा गोरु जुधाई मेला हुन्छ । तारुका गाविस वडा नं. ५ स्थित कटरबोटे चन्दनीमा यसपटक २० हल भन्दा बढी गोरु जुध्दैछन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमासमेत ख्याती कमाएको यो गोरु जुधाई मेलाको तयारीलाई अहिले तिब्र बनाईएको उक्त मेला व्यवस्थापन समितिको भनाई छ । मेलाको इतिहास, यसपटकको मेलाको तयारीलगायतका सन्दर्भहरुको सेरोफेरोमा आधारित रहेर मेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनकराज ढुंगानासँग गन्तव्य नेपाल न्यूजका लागि सुवास भट्टले गरेको अन्तर्वार्ता :
माघेसङ्क्रान्ति नजिकिँदै छ, मेलाको तयारी कस्तो छ ?
मेला आउन अब १० दिनमात्र बाँकी छ । तर, हामीले मेलाको तयारीलाई तिब्र पारेका छौँ ।
मेलालाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि ९ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । क्षति न्यूनिकरणका लागि ९ सदस्यीय र फिल्ड व्यवस्थापनका लागि १५ सदस्यीय स्वयंसेवक दस्ता गठन गरिसकिएको छ । त्यस्तै सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि ६ सदस्यीय समिति गठन गर्नुका साथै बाहिरी वातावरण सहजताका लागि तारुका गाविसका तीन माध्यामिक विद्यालयका कक्षा १० का १ सय ५० विद्यार्थीहरुको टिम परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुका लागि आवासको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसबाहेकका अन्य तयारी पनि तिब्र गतिमा हुँदैछन् ।
यसपटक कति हल गोरु जुध्नेछन ?
गोरु जुधाउनका लागि अन्तिम मिति यही २२ गतेसम्मका लागि तय गरिएको छ । सोमबारसम्म १२ हल गोरु दर्ता भएका छन् । अरु थपिने क्रममा छन् ।
गोरु जुधाउनका लागि प्रकृयाहरु के –के छन् ?
प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहने गोरु धनीले ५ सय रुपैयाँ धरौटी राखेर दर्ता गराउनुपर्छ । नेपालको जुनसुकै भागबाट पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहनेलाई रोकटोक छैन् ।
कस्ता गोरुले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँछन् ?
समान शारीरिक ढाँचा र मोटोपनका आधारमा प्रतिस्पर्धाका लागि गोरुको चयन गरिन्छ । बिजोर गोरुहरुलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराईन्छ ।
प्रतिस्पर्धामा ल्याउनका लागि किसानहरुले ठूलो मिहिनत गरेका हुन्छन् । उनिहरुले धेरै करिब ७÷८ महिनाअघि देखि नै तयारी थाल्छन् । तेल, अण्डा, चामल, मासलगायतका शक्ति दिने खालका पोसिलो खाद्यान्न खुवाई पाल्छन् । असारदेखि नै दुधिलो मकै खुवाउँदै गोरुलाई बलिष्ट र प्रतिस्पर्धामा विजयी बनाउने गरी तयारी थालिएको हुन्छ ।
इनाम तथा पुरस्कारहरुको व्यवस्था कस्तो छ ?
मेलालाई हालसम्म दर्ताको प्रक्रियामा लान नसकिएकोले हामीले धेरै इमान र पुरस्कार दिन सक्ने अवस्था छैन् । यद्यपी, विजेतालाई २ हजार र उपविजेतालाई १ हजारको पुरस्कार दिइन्छ ।
आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
२ देखि अढाई लाख रुपैयाँसम्मको खर्च मेला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्छ ।
मेलाका लागि गाविसबाट वर्षेनी ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । जिविसबाट पनि निश्चित नभए पनि केही मात्रामा सहयोग हुन्छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र विभिन्न व्यपारिक तथा व्यवसायीक संघसंस्थाहरुले आफ्नो खुसीअनुसारको सहयोग गर्छन् । यसैबाट यो मेला चल्छ ।
विनासकारी भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण विभिन्न संकटहरु निम्तिएका छन्, यसले यसपटकको मेलामा केही असर परेको छ ?
मेला आयोजना गर्नका लागि त्यस्ता समस्याहरु देखिन्न । बरु यसपटक ५० हजार दर्शक मेलामा उतार्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
मेला आयोजना गर्नका लागि समस्या के छन् ?
अहिले ६ रोपनी क्षेत्रफलको क्षेत्रमा गोरु जुधाइन्छ । यो निजी जग्गा हो । सो जग्गा सार्वजनिकीकरण हुन सकेको छैन् । तथापी, हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।
त्यस्तै खर्चको व्यवस्थित टुङ्गो लाग्न सकेको छैन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार पनि यथेष्ठ मात्रामा हुन सकेको छैन् ।
यो मेलाको इतिहासबारे पनि केही प्रष्ट्याईदिनोस् न !
तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमषेरका ज्वाइँ जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई तारुका विर्ता दिईएको थियो । त्यो समय भनेको सन् १९७० को दशक थियो । सो समयमा मनोरञ्जनका अन्य साधनहरु नभएकाले स्थानियहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नका लागि यो मेला सुरु गरिएको बुझिन्छ । सोही समयदेखि स्थानिय किसानहरुले गोरु पाल्ने र जुधाउने गरिआएका हुन् ।
तसर्थ यो मेलाको ऐतिहासिक विकासक्रम हेर्दा सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराको रुपमा विकसित हुँदै आएको देखिन्छ ।
सो मेलालाई व्यवस्थित र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउनका लागि वि. सं. २०६२ सालदेखि मेला व्यवस्थापन समिति गठन गरियो । यसले मेलालाई थप ब्यापक बनाउने काम गर्‍यो । यसभन्दा अगाडि तारुकाका विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै रुपमा गोरु जुधाईन्थ्यो ।
अहिले पनि तारुकाबाहेक अन्य क्षेत्रमासमेत गोरु जुधाइन्छ, होईन ?
अन्य होईन । अहिले रसुवा र नुवाकोटको सीमा वेत्रावतीमा गोरु जुधाइन्छ । उनिहरुले त वि. सं. २०६२ देखि गोरु जुधाउन थालेका हुन् ।
अन्तमा, तपाइँको सन्देश के छ ?
विश्वकै दुर्लभ प्रतियोगिता रहेको यो गोरुजुधाई मेलालाई थप परिष्कृत र व्यापक प्रचारप्रसार गर्न सकेको खण्डमा यसले स्थानिय किसान र तारुकामात्र नभएर सिङ्गो नेपाललाई नै चिनाउन सक्छ ।
यसका निम्ति मूलधारका संचारमाध्यम, नेपाल पर्यटन बोर्ड, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विशेष जिम्मेवारी बहन गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा यो मेला नेपालकै गौरवको मेला बन्न सक्छ ।